Wax soo saar Blogging: Liiska Hubinta ee loogu talagalay WordPress
Ku noqo BlogIndiana 2010, waxaan u sameynay jilitaan jilicsan oo loogu talagalay WordPress plugin si loo caawiyo kordhinta wax soo saarka shaqaalaha. Waxaa loo yaqaan 'Blogging Checklist', waxayna ku saleysan tahay awood aan la rumaysan karin oo fudud oo haddana yaab leh oo liistada hubinta ah.
Liiska Hubinta Blogging-ka waa uun sida ay u egtahay: waxay kuu abuureysaa sanduuqyo jeegag ah oo aad adigu isticmaali karto marka aad qoraysid boostada. Xaqiiqdii, waxaad ku guuleysan laheyd isla wax la mid ah dukumintiga ereyga ama warqad qoraal ah, laakiin adoo ku dhejinaya tan kumbuyuutarka WordPress waxay u badan tahay in la jaangooyo oo dhab ahaan loo isticmaalo. Waa tan waxa ay u egtahay:
Waa intaas! Marka laga reebo, dabcan, waxaad astaysto alaabta si ay uga koobnaato waxaad rabto. Liiska warbixintu wuxuu ka muuqdaa meesha ugu faa'iidada badan ee la qiyaasi karo, bogga Edit Post-ka laftiisa. Marka intaad tahay qoraal boostada, runti waad iska hubin kartaa waxyaabaha ku qoran liiska.
Ka-habeynta liiska runtii way fududahay sidoo kale. Uma baahnid inaad wax HTML ah ogaatid. (Inkasta oo aad isticmaali karto haddii aad rabto.) Halkan waa bogga maamulka:
Naqshadeynta qalabka loogu talagalay looguma talagalin inuu ahaado wax aan ka aheyn suufka xoqida. Midkoodna xogta lama keydin, taas oo ah sida saxda ah ee aad rabto. Ka dib oo dhan, kormeer muuqaal ah waa in la sameeyaa si loo xaqiijiyo inaad sameysay wax kasta oo ku taxan. Tan waxaa ku jiri kara talaabooyin sida "ordaar higgaadin" ama "geli sawir kayd ah" ama laga yaabee "tijaabinta xiriiriyeyaasha dibedda." Kuwaas oo dhami waa shey aad ku taqaanid adiga waa in samee mar kasta oo aad wax ku qorto, laakiin qalabkan adoo xusuusinaya inaad sameyso kasta waqtiga. Waxa ugu fiican oo dhan, mid kasta oo ka mid ah qorayaashaadu waxay arki doonaan isla liiskan, oo horseedaya qoraallo isku dheelitiran, tayo sare leh.
Waa bilaash waana qayb ka mid ah keydka rasmiga ah ee WordPress. Ka raadi "Liistada Hubinta Blogging" ee boggaaga ku rakibidda WordPress, ama booqo bogga rasmiga ah.
Liis garayn farxad leh!
Tags: Analyticssuuqgeyntuastaanta facebookmicrosoft firfircoonaanta crmpr qaybintaregex